We.com.mm - နာမည်ကျော်ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က နာမည်ကျော်မင်းသားချောများ
စူပါဟီးရိုးဇာတ်လမ်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီလိန်ဆိုတာမပါရင် ဟီးရိုး ဇာတ်ကောင်ကလည်း အလကားပါပဲ။ ဗီလိန်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ဟာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ အရေးကြီးတဲ့ နေရာဖြစ်ပြီး အဓိကဇာတ်ကောင်ကို ဟီးရိုးပိုဆန်အောင် မီးမောင်းထိုးပေးတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေပါ။ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာက နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်နေရာအတွက် နာမည်ကြီးတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။
နာမည်ကျော်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အဲဒီလိုဗီလိန်ဇာတ်ကောင်တွေအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသားများစွာထဲကမှ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဒါမှမဟုတ် လတ်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ မင်းသား တချို့ကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Josh Brolin as Thanos
အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဂျော့ရှ်ဘရိုလင်ဟာ အခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့ Avengers: Endgame အပါအဝင် အရင်က Avengers ဇာတ်လမ်းတချို့မှာ မာဗယ်ရဲ့ အဓိကဗီလိန် ဇာတ်ကောင်ကြီး သားနို့စ်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ထားပါတယ်။ နာမည်ကျော်ဇာတ်လမ်းများစွာမှာ ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘရိုလင်ဟာ Deadpool2မှာလည်း အဓိကဗီလိန်ဖြစ်တဲ့ Cable နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
2. Tom Hiddleston as Loki
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် နာမည်ကျော်အင်္ဂလိပ်မင်းသားချော တွမ်ဟစ်ဒယ်စတန်ကတော့ Thor နဲ့ Avengers ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်တစ်နေရာလို့ ဆိုရမယ့် လှည့်ဖျားမှုနတ်ဘုရား လိုကီနေရာက ပါဝင်ခဲ့ပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော်မင်းသားတစ်လက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီလိန်စစ်စစ်မဟုတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်း အရ ကောင်းတလှည့် ဆိုးတလှည့်နဲ့ လိုကီအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ တွမ့်ကို လာမယ့် Loki ရဲ့ solo ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း ဆက်လက်တွေ့မြင်ရဦးမှာပါ။
3. Tom Hardy as Bane
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် ဟောလိဝုဒ်မင်းသားချော တွမ်ဟက်ဒီကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက Batman ဇာတ်လမ်း The Dark Knight Rises မှာ အဓိကဗီလိန်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘိန်း နေရာက ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်။ နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဟက်ဒီဟာ The Revenant (2015) အပါအဝင် ဇာတ်လမ်း တချို့မှာလည်း ဗီလိန်နေရာက ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရုံတင်ခဲ့တဲ့ Venom ဇာတ်လမ်းကစလို့ ဟက်ဒီတစ်ယောက် ဗီနွန်ဆိုတဲ့ စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
Joker ဆိုတာ DC ရဲ့ နာမည်ကျော် ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်သလို တကယ့်ကို နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က DC စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင် The Dark Knight မှာတော့ ဂျိုကာ ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သြစတြေးလျမင်းသား ဟိသ်လက်ဂျာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိသ်လက်ဂျာဟာ သရုပ်ဆောင်ရခက်တဲ့ ဂျိုကာနဲ့ တစ်သားတည်းကျအောင်၊ ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးပြီးချိန်မှာတော့ အသက် ၂၈ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ လက်ဂျာတစ်ယောက် ကျန်းမာရေးကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။
5. Ralph Fiennes as Lord Voldemort
အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် အင်္ဂလိပ်မင်းသားကြီး ရက်လ်ဖ်ဖီးန်စ်ဟာ နာမည်ကျော်ဇာတ်လမ်းများစွာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ နာမည်ကျော် ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းတွေမှာ မှော်နက်သခင်ကြီး လော့ဒ်ဗီုဒီမော့အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ က ပိုမိုနာမည်ကျော် လူသိများခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားကြီးရဲ့ နဂိုရုပ်ရည်ဟာ မျက်လုံးပြာပြာနဲ့ လူချောတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ နှာခေါင်းဟဟနဲ့ ကြည့်ရဆိုးတဲ့ မှော်နက်သခင်ကြီး ဗိုဒီမော့အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
6. Johnny Depp as Gellert Grindelwald
Pirate of the Caribbean ဇာတ်လမ်းတွေနဲ လူသိများခဲ့တဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက်နာမည်ကျော် ဟောလိဝုဒ် မင်းသားကြီး ဂျော်နီဒပ်ဟာ ဗီလိန်နဲ့ လူဆိုးဇာတ်ရုပ်များစွာမှာလည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်က ဗီလိန်အဖြစ် ဂျော်နီဒပ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ စပ်ဆက်နေတဲ့ “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဂျော်နီဒပ်က မှော်နက်ပညာရှင်ကြီး ဂီးလ်လက်ထ်ဂရင်းဒယ်လ်ဝေါ (Gellert Grindelwald) အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်တွေဟာ သရုပ်ဆောင်မင်းသားနဲ့ တစ်သားတည်းကျခဲ့သလို လတ်တလော မှာလည်း နာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေအများကြီးထဲကမှ တချို့ကို ရွေးထုတ်ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref; The Things, Wikipedia
ပင်ဂွင်းပေါက်လေးကို‌‌ မွေးစားခဲ့ကြတဲ့ ပထမဆုံး လိင်တူပင်ဂွင်း ‘အမ’ စုံတွဲ
Crush ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုလေးကို ချစ်တာ၊ သူ့ရဲ့ ရည်းစားမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ သွန်းဆက်
Collaboration လုပ်ကြမယ့် Red Velvet နဲ့ TWICE
ပရိသတ်တွေ ကတော့ အဖွဲ့ဝင် ၉ ယောက်စလုံးကို ပြန်တွေ့ချင်နေတဲ့ SNSD
Strong Woman ထဲကမင်းသား မင်ယော့အကြောင်း
ရေထဲကျသွားတဲ့ iPhone ကို ဆယ်ယူပြီး ပိုင်ရှင်ဆီပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ဝေလငါးလေး